Famolavolana UX sy SEO: Ahoana ny fomba hiasa miaraka amin'ireo tombotsoanao | Martech Zone
Rehefa nandeha ny fotoana dia nivoatra ny zavatra andrasana amin'ny tranonkala. Ireo fanantenana ireo dia mamaritra ny fenitra amin'ny fomba fanamboarana ny traikefan'ny mpampiasa atolotry ny tranonkala iray.
Miaraka amin'ny fanirian'ny milina fikarohana ny valiny tena mahaliana sy mahafa-po indrindra amin'ny fikarohana, dia misy ny laharam-pahefana sasany dinihina. Ny iray amin'ireo zava-dehibe indrindra amin'izao fotoana izao dia ny traikefan'ny mpampiasa (sy ireo singa an-tranonkala isan-karazany izay mandray anjara amin'izany.). Izy io, noho izany, dia azo resahina fa UX dia lafiny iray lehibe amin'ny fanatsarana ny motera fikarohana.
Miaraka amin'izany ao an-tsaina dia tsy maintsy ataonao izay hamolavolana ny UX stratejika. Amin'ny fahafahanao manome UX mendri-piderana dia manatsara ny SEO an'ny tranokalanao ianao.
Ireto manaraka ireto dia fomba iray ahafahanao manatsara ny fomba fampiasana ny famolavolana UX hanatsarana amin'ny fomba mahomby an'ity faritra anaovanao SEO ity:
Fiatrehana ny maritrano fampahalalana ao amin'ny tranokalanao
Iray amin'ny ankamaroan'ny lafiny manan-danja amin'ny famolavolana UX dia ny fomba fametrahana ny mombamomba anao. Zava-dehibe ny hitadidiana fa ny tranokalanao dia tokony hanana maritrano fampahalalana momba ny namana ahafahana manatanteraka ny tanjon'izy ireo amin'ny tranokalanao. Ny tanjona dia ny hiantohana fa any ianao dia afaka manome endrika tranokala ankapobeny izay tsotra sy intuitive, ahafahan'ny mpampiasa manatsara ny fampiasana ny tranokalanao ho an'ny tanjon'izy ireo.
Desktop sy fahitana finday an'ny Apple
Fanamboarana ny fitetezana tranokala
Singa famolavolana UX iray hafa tokony hodinihina ny fitetezana ny tranokalanao. Na dia hevitra tsotra aza ny manana teti-pitetezana ahafahan'ny mpampiasa mandeha am-pilaminana any amin'ny faritra samihafa amin'ny tranokalanao, tsy ny tranonkala rehetra no hahatratra an'izany. Tokony hiezaka ianao amin'ny alàlan'ny teti-pitetezana miasa izay mikendry ny hanome fomba mora indrindra hitetezana ny tranokalanao.
Ny tsara indrindra dia ny famolavolana ny teti-pitetezana ny tranokalanao ho lasa ambaratonga ambony.
Ny haavon'ny ambaratonga voalohany anao dia ny fitetezana anao izay misy ny pejy ankapobeny indrindra amin'ny tranokalanao. Ny fitetezana anao lehibe dia tokony hisy ny tolotra voalohany ataon'ny orinasanao, ary koa ireo pejy manan-danja hafa izay tokony ao amin'ny tranonkalanao toy ny pejy About Us.
Ny fivezivezena amin'ny ambaratonga faharoa dia ny fitetezam-paritany izay pejy manan-danja ihany koa amin'ny tranokalanao, saingy mety tsy dia lehibe loatra tahaka ireo izay hapetraka eo amin'ny fitetezana lehibe. Ity dia mety ahitana ny pejy Mifandraisa aminay, sy ireo pejy faharoa amin'ny tranokalanao.
Azonao atao ihany koa ny mampiasa multi-level, na fitetezana mega izay ahafahan'ny menanao mitarika amin'ny sub-menus. Tena ilaina izy io amin'ny famelana ny mpampiasa anao handavaka lalindalina kokoa amin'ny tranokalanao avy eo amin'ireo bira fitetezanao. Safidy fitetezana ihany koa ity ho an'ireo orinasa manana vokatra na serivisy marobe izay azo ampitomboina amina sokajy isan-karazany. Na izany aza, ny fanamby ho an'ity dia ny miantoka ny fiasan'ny menio takelakao satria misy tranokala sasany izay mihintsana ny baran'ny menio alohan'ny hahatongavanao amin'ilay pejy tadiavina.
Averina indray, ny hevitra dia ny hahazoana antoka fa ho afaka hanome ny mpampiasa anao fahaiza-miaina haingana sy milamina manodidina ny tranokalanao ianao. Ny fanamby dia ny fanaovana asa-tanana a teti-pitetezana mifantoka amin'ny mpampiasa izany dia afaka hahatratra an'io.
Miasa amin'ny fanatsarana ny hafainganan'ny tranokalanao
Ny faritra manaraka izay misy fiatraikany amin'ny traikefan'ny mpampiasa dia ny hafainganan'ny tranonkalanao. Zava-dehibe ny fahafahan'ny tranokalanao mitondra entana haingana, na mety hiharan'ny fatiantoka be ianao.
Raha tsy mavesatra ao anatin'ny 3 segaondra ny tranokalanao dia azo antoka fa handeha ambonin'ny tampon-trano ny tahan'ny fiakarana. Saingy tsy tokony hiova haingana ny pejinao, fa tokony hahafahanao mamela ny mpampiasa anao hifindra amin'ny pejy hafa ihany koa.
Mba hahatratrarana an'io, ny tranokalanao dia tokony hanome antoka aloha fa mandeha amin'ny fotodrafitrasa mahomby be ny tranokalanao. Ny mpizara anao na ny serivisy fampiantranoana nomenao dia tokony ho afaka hanohana ny tranokalanao sy ny isan'ny mpampiasa izay hitsidika azy io, hiantoka ny famoahana haingana ho an'ny rehetra.
Dingana iray hafa ny fiantohana fa maivana ny tranokalanao, afaka amin'ny rakitra media mavesatra izay mety hiteraka korontana amin'ny tranokalanao. Tsara raha manana rakitra haino aman-jery isan-karazany, saingy tokony hotehirizina farafahakeliny farafahakeliny, ary raha ilaina izany.
Ny endrika UX dia tokony hifanaraka amin'ny fiovam-po
Drafitra fisainana sary haingon-tsary maoderina fisainana momba ny fitomboan'ny fifamoivoizana amin'ny tranokala, ny fanatsarana ny motera webpage, ny famakafakana tranokala ary ny fampandrosoana ny atiny. Mitokana amin'ny lokon'ny loko miloko
Mba hahazoana antoka fa hitondra famerenana ny famolavolana UX an'ny tranokalanao dia tokony hamboarinao amin'ny fiovam-po izany. Midika izany fa hampiasa antso-to-hetsika mahery vaika, ary koa paikady hafa mifantoka amin'ny foibe famadihana.
Fa alao antoka ihany koa fa na dia miezaka mafy aza ianao amin'ny famporisihana ny fiovam-po, dia tsy hihoatra ny solaitrabe ianao ary ho toa mivarotra mafy eraky ny tranokalanao. Tokony hifantoka amin'ny mpampiasa ny tranokalanao, mihoatra ny zava-drehetra. Izany rehetra izany dia ny fampiasana ny tranokalanao hahafahana manome ny traikefan'ny mpampiasa tsara indrindra. Eo am-panaovana izany dia azonao atao ny mampiditra paikady manohana izay ahafahana mandroso ny fiovam-po.
Maka tombony amin'ny fivezivezena sy ny fandraisana andraikitra
Ary farany, tokony hifantoka amin'ny maha-zava-dehibe ny fivezivezena sy ny fandraisana andraikitra ihany koa ianao - lafiny roa izay ateraky ny fiparitahan'ny finday avo lenta sy ny fitomboan'ny fikarohana ary ny fampiasana tranokala avy amin'ny fitaovana finday.
Ny tranokalanao dia tokony ho afaka hanome ny haavon'ny traikefa kalitao mitovy ho an'ny mpampiasa finday raha oharina amin'ny fomba nentim-paharazana tranokala. Miaraka amin'izany ao an-tsaina, tsara kokoa ny mamolavola ny tranokalanao ho mailaka rehefa ampidirina avy amin'ny finday. Ankoatry ny maha-singa iray niainany ny mpampiasa, fandraisana andraikitra amin'ny finday dia singa iray manan-danja indrindra ao aminy, indrindra fa ny motera fikarohana dia mijery bebe kokoa amin'ny tranokala finday izao.
Ny tsara indrindra dia ny mampiasa endrika tranonkala mamaly, izay mamela ny tranokalanao hanitsy ny tenany amin'ny fitaovana rehetra nefa tsy mila mamoaka kinova marobe amin'ny tranokalanao.
Ampitomboy ny UX ho an'ny SEO mihatsara
Manomboka amin'ny traikefan'ny mpampiasa ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra hanatsarana ny tranokalanao amin'ny taona 2019 singa iray lehibe tsy azo lavina fa laharam-pahamehana, mety ny miasa amin'ny fanatsarana azy. Misy lafiny maro tafiditra ao, ary ny sasany amin'ireo manan-danja indrindra dia voatanisa etsy ambony. Farafaharatsiny mba hiasa amin'ireo faritra dimy ireo, ary ho eo amin'ny làlana tsara ianao hiantohana fa hanana tranokala tsara kokoa hahazo toerana tsara amin'ny valin'ny fikarohana ny tranokalanao.
Tags: seo eo an-toeranaFivarotana finday sy tablettefikarohana biolojikatompon'andraikitrafamolavolana ux
John Vuong no tompon'ny Local SEO Search Inc.,. Ny tanjon'i John dia ny manampy ireo tompona orinasa eo an-toerana hanatsara ny fitaoman'izy ireo an-tserasera mba hahafahan'izy ireo manjaka amin'ny indostrian'izy ireo. Miaraka amin'ny fahaizany am-barotra sy fahatakarana voajanahary ny tontolon'ny orinasa eo an-toerana, John dia nanoratra bilaogy izay manadihady momba ny fomba fanamboarana ny fanentanana SEO miorina amin'ny filan'ny mpanjifa.